Baanka Dibadda ee Badbaadinta Hantida, Maalgelinta iyo Kaydinta Canshuurta
Baanka dibedda ee dibedda ku nool ayaa muddo dheer ka soo horjeesatay sumcadda mugdiga ah. Waxay badanaa u maleynayaan inay yihiin kuwa ku yaala waddamada canshuurta. Sidaa daraadeed, kuwa aan ognahay waxay ka fekerayaan inay caawiyaan dad aan waxba galabsan oo khiyaanaynaya dawladooda iyada oo loo marayo qarinta dakhliga iyo canshuur celinta. Si kastaba ha noqotee, muuqaalkan xun ayaa ah mid aad u cakiran, bangiyada dibadda intaba waxaa badanaa lagu arkaa hay'ado maaliyadeed oo ammaan ah.
Waxaa jira sababo badan oo dadku u furaan xisaabaadka bangiyada dibadda. Marka qayb ka mid ah qorshaha badbaadinta hantida ee wanaagsan, koontada bangiga dibadda waxay kaa caawin kartaa inaad ilaaliso lacagtaada. Ka ilaalinta xisaabtanka shisheeye ee jasiiradda offshore iyo kalsoonida ilaalinta hantida ayaa maxkamadda maxalliga ah ka ilaalin kartaa jeebkaaga. Milkiilayaasha ganacsiga leh hawlaha adduunka oo dhan waxay u isticmaalaan inay caawiyaan fududaynta macaamilada caalamiga ah Maalgashadayaashu waxay u isticmaalaan inay ka faa'iideystaan ​​fursado maalgashi oo aan laga heli karin dalalkooda hooyo. Dad badan oo reer Mareykan ah iyo dadka reer EU ah, ayaa ka daalay dulsaar la'aanta joogtada ah ee bangiyada maxalliga ah, ay ku tiirsan yihiin bangiga badda inaad ku raaxaysato dulsaar sare.
Baanka Dhexe ee Bixiya Macaamiisha Macaamiisha
Dhexdhexaadkan, sameynta lugta looga baahan yahay inay bixiso dhamaadka. Inkastoo sharciyada warbixinta oo qarsoodi ah oo adag, ayaa haddana jira dhowr baananka ajnabiga ee qaata macaamiisha Mareykanka. Si kastaba ha noqotee, dhammaantood isku mid ma ahan. Waqti qaado si aad u miisaanto faa'iidada iyo khasaarooyinka ikhtiyaar kasta ka hor intaadan go'aan ka gaarin. Markaad maskaxdaada sameyso, si aad u sii soco oo ha sugin. Marna ma ogaan kartid marka dacwad ku qoran magacaaga ay ku dhici doonto miiska miiska garsoorka Mareykanka oo kuu keenaya hantidaada xoogga leh ee halista ah.
Qeexidda Bangiga Dibadda
Baanka dibedda ayaa sidoo kale loo yaqaan bangiyada dibadda ama bangiyada shisheeye. Kuwani waa xarumaha maaliyadeed ee ku yaal meel ka baxsan wadanka martigeliyaha. Nasiib darro, bangiyadaasi waxay soo iibsadeen sumcad aad u badan sababtoo ah xayiraadda sirta ah oo inta badan lala xiriiriyo iyaga. Si kastaba ha noqotee, dhowrista qawaaniinta caalamiga ah ee dhowaan ayaa si tartiib ah u xayiray muuqaalkan qarsoodiga ah ee bangiyada dibadda. Maanta waa la fahamsan yahay loona mahad celinayaa bixinta adeegyo badan oo bangiyeed oo sharci ah.
Dad badan oo ka mid ah wax walba oo nolosha ah ayaa iminka si joogta ah u isticmaala bangiyada dibadda si ay u dhamaystiraan macaamilo sharci ah oo dhamaystiran. Goonku waa maalmo qarsoodi ah Xisaabaadka bangiga Swisska qarsoodi ka dambeeya qiiqa iyo muraayadaha. Sida aad u aragto hoosta, bangiyada dibadeed waxay bixiyaan fursado aad u fiican si ay lacagtaada uga dhigto mid aad u adag.
Faa'iidooyinka Badbaadada Hantida ee Bankiyada Dibadda
Waagii hore, shakhsiyaadka sida badan lala xiriiriyo xisaabaadka bangiyada dibadda ayaa ah kuwa iibiya daroogada iyo khiyaamooyinka canshuurta. Tani weligeed ma ahan 100 boqolkiiba run, dabcan. Laakiin aragtida ayaa si wayn loo qabtey waxayna joogtey muddo tobanaan sano ah. Si kastaba ha ahaatee, dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee dunida, sida ka ganacsiga daroogada adduunka iyo argagixisada, waxay si wayn u beddeleen muuqaalka bangiyada. Inta badan hay'adaha maaliyadeed ee lagu qadariyo adduunka oo idil waxay ku heshiiyeen in la helo daahfurnaan iyo wada shaqeyn dheeraad ah. Tani waxay keentay in kor u qaadista daboolka qarsoodiga ah ee marxalado qarsoodi ah-ku yaal bangiyo badan oo dibadeed.
Bangiga Dhexe ee Bankiga + Hay'ada Ilaalinta Xoolaha
Hase yeeshe, daahfurnaanta, si kastaba ha ahaatee, si buuxda uma dhicin faa'iidooyinka badbaadada hantida ee xisaab bangi dibadeed. Cusub cusub oo la dhisay iyo badanaa la hagaajiyay Macluumaadka Bangiga Dhexe wadaagista waxay adkeeyeen in la qariyo hantida lagu hayo bangiga shisheeye. Laakiin sababtoo ah nemesis sharcigaaga ogyahay meesha aad hanti leedahay, micnaheedu maahan in isaga ama iyadu ay heli karto. Lacagta aad dhiganayso dibadda dibadda kuma filna. Lama ilaaliyo sharciyada bangiyada iyo sharciyada dalka ee bangigaagu ku yaal. Sidaas, xalku waa maxay? Dhaqaalahaaga dibadda ku yaala gudaha shirkadda offshore sida shirkad uu leeyahay a Ilaalinta hantida badda kalsooni Sidan oo kale marka garsoorahaaga saaxiibtinimada ah uu dalbado in aad dib u soo celiso lacagta, waxaad leedahay xulafadaada dhinacaaga. Wakiilkaagu wuxuu ku tallaabsan karaa inuu ku ilaaliyo.
Iyada oo lacagtaada ku jirta bangiga dibadda iyo qalabyada sharciyada caalamiga ah, deyn bixiyeyaasha fursadaha waa inay raacaan shuruucda qaanuunka ajnabiga ah. Haddii ay rabaan inay kala soocaan lacagtaada waxay leeyihiin huur ku filan inay koraan. Tani waa wax badan oo ay ka xumahay (iyo faa'iidadaada). Tani waxay noqon kartaa nidaam dhib badan, oo soo jiidasho leh oo qaali ah. Iyo sida lagu xusay, waa labalaab adag tahay haddii aad dhigato xisaabtaada bangigaaga ee ku taal kalsoonida ilaalinta hantida badda. Xasuusnow, in lakabyada badan ee ilaalinta ay jiraan waxa u dhaxeeya dacwadaha suurtagalka ah iyo hantidaada, aad bay u ammaan badan tahay.
Faa'iidada Ganacsiga ee Bankiyada Dibadda
Haddii ganacsigaadu leedahay joogitaan caalami ah, waxaad horey u ogtahay faa'iidooyinka lagu ilaalinayo xisaabaadka bangiyada shisheeye. Bangiyada dibadda waxay bixiyaan adeegyo mushahar oo loogu talagalay shirkadaha leh shaqaalaha iyo alaab-qeybiyeyaasha dalalka kala duwan. Intaa waxaa dheer, waxay bixiyaan waraaqo deyn ah si loo hubiyo bixinta adeegyada wanaagsan iyo adeegyada ee shirkadaha wadamada kala duwan. Iibsiga iyo dhoofinta alaabooyinka aduunka oo dhan waa qaali. Bangiyada dibadda waxay si joogto ah u bixiyaan adeegyo maalgelin ganacsiyada ku hawlan hawlaha ganacsi.
Xitaa haddii ganacsigaadu uusan wali ku riyaaqin gaadiid caalami ah, furitaanka koontada dibadda ayaa weli macno samaynaya. Waxaad si fiican u noqon doontaa inaad si dhakhso ah uga faa'iidaysato fursadaha ganacsi ee faa'iido leh oo laga yaabo inay si lama filaan ah uga muuqdaan muuqaal caalami ah. Maadaama ganacsade kastaa ogyahay, karti-u-helidda xushmayntu waxay faa'iido u leedahay nooc kasta oo ganacsi gudaha ah ama caalami ah.
Qaybi iyo ka-qabso
Haddii aad ku haysato labadaba ganacsi iyo koonto shakhsiyeed ee bangigaaga dibadda, hubi inaad kala tagtaan. Habkani, haddii dayn-bixiye uu ku soo galo amniga hantidaada ganacsiga, hantidaada shakhsi ahaaneed waxay ahaan kartaa mid ammaan ah - ama tan kale. Dayn-bixiyeha waa inuu kiis kale kugu dhejiyaa haddii uu ama iyadu rabto inay hesho helitaankaaga hantidaada. Mar kasta oo suurtogal ah, tixgelin sidii loo dhisi lahaa LLC wax ka qabashada xukunka dejinta. Waxaad markaa u isticmaali kartaa hannaankaas 'hantida' hantida ganacsiga ee bangigaaga dibadda. Lakabka kale ee ilaalinta ayaa la dhammaystiray.
Fursadaha Dheeraadka ah ee Baanka Dibedda ah
Maalgashadayaasha guuleeysta waxay og yihiin in khariidado kala duwan oo kala duwan ay u adkeysan karaan suuqa iyo ganacsiyada isbeddelka ka fiican mid ka mid ah hanti kooban. Baanka dibadda inta badan waxay siiyaan bangiyada inay helaan fursado maalgashi caalami ah oo aan laga helin dalkooda hooyo. Tani waxay si gaar ah u hubisaa xarumaha maaliyadeed ee caalamiga ah sida Switzerland iyo Singapore. Isticmaalka bangiga dibadda wuxuu bixiyaa albaab la xidhiidha fursadaha maal-gashiga gaarka ah - iyo dakhliga ugu weyn ee ay soo celiyaan.
Bangiyada shisheeye ee badan ayaa weli siiya dadka Maraykanka iyo dadka reer Yurub degganaha dulsaarkooda lacag badan. Tani waxay si gaar ah u tahay bangiyada waddamada leh kaydka yaryar ee yaryar ee haysta dalab weyn oo loogu talagalay amaahda dollarka laga soo qaato macaamiisha kale. Si aad kuugu dhiirigeliso inaad ku dhigato dakhligaaga Mareykanka, waa inay bixiyaan dhiirigelin. Iyada oo heerka dulsaarka dulsaarka ee Maraykanka, bixinta dulsaarka sare ee sare waa soo jiidasho soo jiidasho leh. Farqiga dhabta ah ee dollarka iyo sanduuqyada wax badan uma dhimi karo - haddii aadan ku hadlin malaayiin dollar oo lacag ah. Waa kan aragtida ee lacagtaada ku kasbatay wax badan oo isbeddel weyn sameynaya. Tani waxay si gaar ah u tahay kuwa deyn-bixiyeyaasha ah ee ka daalay heerka dulsaarka niyadjabsan ee dalalkooda hooyo.
Goobta Aasaasiga ah ee Baanka ee ugu Fiican
Ma jiro hal meel oo kaamil ah oo dibedda ku yaal ama dibadeed oo ku yaal koonto bannaan oo ku habboon qof walba. Ka digtoonow macaamiisha maaliyadeed ee sheeganaya haddii kale. Waa dhab, dabcan, qaybo ka mid ah adduunka ayaa ka fiican kuwa kale. Haddii aad dooratay, oo aad sameysid, maxaad u dooran lahayd bangi dibadeed oo waddan siyaasad ahaan aan degganeyn?
Ka billow heerka khatarta ah ee aad ku raaxaysantahay. Haddii aad u malaynaysid bangiyada ku yaala jasiiradaha yar yar ee jasiiradda aan lahayn, waxay doortaan bangiyada dibadda ama Yurub. Migrationsverket iyo Switzerland oo dhexdhexaad ah waxay noqon kartaa ikhtiyaar. Inkasta oo Hong Kong ay tahay jasiir, waxay ku riyootay taariikhda bangiga oo deggan. Haddii dhaqaalaha ugu dambeeya ee dhaqaalaha bangiga uu kaaga muhiimsan yahay goobta uu ku sugan yahay, Hong Kong wuxuu noqon lahaa awood aad u wanaagsan oo lagu furo xisaab bangi oo ajnabi ah.
Marka xigta, waa inaad ku ekaataa iyadoo ujeedadu tahay in bangigaaga dibedda u adeegi doono. Haddii badbaadinta hantida ay tahay mudnaantaada ugu sareysa, dooro goobta leh sharciga ugu badan ee dejinta. Tani waxaa kale oo laga yaabaa inaad doonaysid inaad tixgeliso awooda xukunka ee raali ahaansho iyo furfuran si loo ilaaliyo dejinta kalsoonida iyo aasaasayaasha LLC. Habkan, haddii aad xisaabtaada ku dhejisid trust ama LLC, si toos ah ayaad u labalaabeysaa ilaalinta lacagtaada. Doorashadaada bangiga ayaa laga yaabaa inay ka duwan tahay haddii ujeedadaada ugu muhiimsan ee aad ku bixineyso lacagtaada bangiga dibadda waa inuu ka faa'iidaysto fursadaha maalgashi ee aan laga helin wadankaaga hooyo. Xaqiiqdu waxay tahay, xulashadaada waa in ay ka tarjumto oo taageerto ujeedooyinka aad u leedahay lacagtaada.
Ugu dambeyntii, dooro bangiga oo xiriir adag la leh bulshada deegaanka iyo sumcad adag oo loogu talagalay siyaasadaha bangiga shisheeye. Ogow in FDIC waxay caymis ku leedahay bangiyada Maraykanka ee degaanka. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad raadineyso adduunka bangiyada ugu wanaagsan, waxaad arki doontaa in Maraykanka, sida qoraalkan uu leeyahay 3 oo kaliya liiska ugu sareeya 50. Bangi dibadeed oo leh saldhig macaamiisha maxaliga ah oo aad u sareeya waxay u badnaan doontaa in ay la kulmaan fekerka dhibaatooyinka dhaqaale. Bangiyada oo raacaya siyaasadaha maaliyadeed ee muhaajiriinta ah micnaheedu waa inay taxaddarayaan lacagtooda macmiilkooda. Waxa kale oo macnaheedu yahay inay u badan tahay in ay haystaan ​​qandaraasyo adag oo la hubo oo lagu dheellitiro si looga hortago xatooyo iyo dhaqaale aan lacag ahayn.
Bangiyada dibadda waa si tartiib tartiib ah, laakiin hubaal waa inay ruxaan sumcaddooda weyn ee marin habaabinta. Waxay cadeynayaan inay yihiin hay'ado sharci ah oo leh door muhiim ah oo ka ciyaaraya marxaladda maaliyadeed ee caalamiga ah. Bangiyada dibadda waxay ka caawiyaan ilaalinta hantidaada, fududeeysa macaamilka ganacsiga adduunka, iyo bixinta dakhliga weyn ee loogu talagalay dhiggooda. Ma jiro meel keliya oo meel bannaan ah oo ku habboon qof walba. Doorashadaada waxay kuxirantahay dhowr arrimood. Waxyaabaha ka mid ah arrimahan waa inay ahaadaan: heerka khatarta aad ku kalsoon tahay, sababta ugu weyn ee aad u fureyso xisaab bangiga dibedda ah, iyo siyaasadaha gaarka ah ee bangiga iyo doorka bulshada ee ay ku yaalaan. Waxba kama jiraan bangiga dibedda ee aad go'aansato inaad isticmaasho, hubso inuu buuxiyo shuruudahaaga ilaalinta iyo isticmaalka ugu fiican ee lacagtaada.